news - phpmyanmar.com
According to TIOBE Programming Community index C is closing its gap with Java. The difference between the number 1 and2of the TIOBE index…
PHP တတိယအသုံးအများဆုံး Language ဖြစ်လာခြင်း။ ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာလ TIOBE Programming Community ၏ စစ်တမ်း index အရ PHP သည် သုံးစွဲမှု တွင် တတိယ နေရာသို့ တက်လာ ပါသည်။ TIOBE အဖွဲ့သည် programming languages များ၏ အသုံး ပြုမှု ကို မှတ်တမ်းတင် နေသော အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့် programming language ကိုမှ ကိုယ်စား မပြုသော ကြားနေ အဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ် ပါသည်။ ထိပ်ဆုံး တွင်ရှိ သော java နှင့်… more....
Php ပရိုဂရမ်မင်း အကြောင်း ဟောပြောပွဲ။ မြန်မာပြည် တွင် ပထမ ဆုံး ပြုလုပ် သည်ဟု ယူဆ ရသော "PHP Programming" အကြောင်း ဟောပြော ပွဲ ကို ရန်ကုန်၊ လှိုင်မြို�့ နယ်၊ MICT Park တွင် ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ အချိန် တွင် ကျင်ပ ပြုလုပ် ခဲ့ ပါသည်။ NaviStar Myanmar မှ ဦးမင်းမြတ်စိုး မှ အဖွင့် စကား ပြောကြာ။ စဉ်။ ဆွေနွေးသူများ အဆိုပါ ဟောပြောပွဲ… more....
Processing time -- 0.0223 seconds.